ထင်ရှားသော ရှစ်လေးလုံး (၈၈၈၈) အရေးအခင်းသည် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် တွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ချီတက်ပွဲများ၊ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲများ၊ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် အဓိကရုဏ်းများ ကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဓိကဖြစ်ရပ်မှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဤသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ၎င်းကို “ရှစ်လေးလုံး (၈၈၈၈) အရေးအခင်း” ဟု လူသိများသည်။
အပေါ်ဆုံးတန်း- ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် စုဝေးနေသော ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများ
အလယ်တန်း- မန္တလေးတွင် ဆန္ဒပြနေသော သံဃာတော်များ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူထုအား မိန့်ခွန်းပြောကြားနေပုံ
အောက်ဆုံးတန်း- မောင်းပြန်သေနတ်များ ကိုင်ဆောင်ထားသော လုံခြုံရေး စစ်သည်များ၊ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နှင်းရာတွင် ကျည်ဆန် ထိမှန်ခဲ့သော ကျောင်းသူလေး
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီက တစ်ပါတီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အောင်မြင်မှုမရခဲ့သော ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းသော မြန်မာ့နည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံများတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော Newsweek မဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းသော မြန်မာ့နည်းကို “ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မာ့က်စ်ဝါဒီ ယုတ္တိမတန်မှု တို့ပေါင်းစည်းခြင်း” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
၈၈၈၈ အရေးအခင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျောင်းသားများက ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများသည် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။ သိန်းပေါင်းများစွာသော သင်္ကန်းဝတ် ဘုန်းကြီးများ၊ ကလေးငယ်များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၊ အိမ်ရှင်မများနှင့် ဆရာဝန်များသည် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အရေးအခင်းသည် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (State Law and Order Restoration Council - SLORC) က စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူမှုအပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဤအရေးအခင်းအတွင်း စစ်တပ်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ အများအပြား သေဆုံးခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အာဏာပိုင်တို့က သေဆုံးခဲ့သည့် အရေအတွက်မှာ ၃၅၀ ခန့်မျှသာဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဤအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံ​ရေးလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသည်။ စစ်အစိုးရက စီစဉ်ဆောင်ရွက်သော ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူမ၏ ပါတီဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရသည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချထားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားမှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရန်ကုန် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများ၏ အစပိုင်း ရက်အနည်းငယ်တွင် လှုပ်ရှားသူများက မန္တလေးရှိ ရှေ့နေများနှင့် သံဃာတော်များကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းရန် ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။ အစိုးရ အလုပ်သမားများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်များ၊ လေတပ်နှင့် ရေတပ် အမှုထမ်းများ၊ အကောက်ခွန် အရာရှိများ၊ ကျောင်းဆရာများနှင့် ဆေးရုံဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် အလွှာပေါင်းစုံမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများက ကျောင်းသားများနှင့် လျင်မြန်စွာ ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲများသည် အခြား ပြည်နယ်မြို့တော်များသို့ ပျံ့နှံ့စေခဲ့သော အခြားသော ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲများအတွက် အဓိကျသည့် အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဩဂုတ်လ ၈-၁၂ ရက်
အထွေထွေ သပိတ်မှောက်ကြီးသည် ကြိုတင် စီစဉ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသော ချီတက်ဆန္ဒပြမှုများ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကျင်းပခဲ့ရာ လူမျိုးစုများ၊ ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ပထမဆုံး စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ကို လှည့်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် နေရာအချို့တွင် ဟောပြောရန် ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ စင်မြင့်ကိုလည်း ဆောက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ဝန်းကျင်မှ ချီတက်ဆန္ဒပြသူများသည် ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် စုရုံးကြသည်။ ဤနေရာတွင် ကြောက်ရွံ့နေသော ယာဉ်ထိန်းရဲများက လူစုထဲသို့ သေနတ်နှင့် ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားပြီး တစ်ဦးတည်းသာ ကျဆုံးမှုရှိသည်ဟု သတင်းပို့ခဲ့သည်။ (ထိုကဲ့သို့ စစ်ကြောင်းချီတက်မှုများသည် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့အထိ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။) ဆန္ဒပြသူများသည် ပြည်သူ့ ဆန္ဒပြပွဲသို့ ပူးပေါင်းဖို့ ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားသည့်အနေဖြင့် စစ်သားများ၏ ရှူးဖိနပ်များကို နမ်းခဲ့ကြသည်။ လူအုပ်ကြီးနှင့် အစောပိုင်း အကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် လူအချို့က စစ်တပ်မှ အရာရှိများကို ဝိုင်းရံ ထားခဲ့သည်။ နောက်ထပ် လေးရက်အတောအတွင်း ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အစိုးရသည် များပြားလှသော ဆန္ဒပြသူများကို တအံ့တဩဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများ၏ တောင်းဆိုချက်ကို “တတ်နိုင်သလောက်” လိုက်လျောရန် ကတိပြုသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဦးစိန်လွင်သည် ဆန္ဒပြသူများကို နှိမ်နင်းရန် လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုများရှိသော နေရာမှ စစ်သားများပိုမို ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်းတွင် ပိုမို၍ ဖွဲ့စည်းမှုကောင်းသော သပိတ်မှောက် ကော်မတီကို ရှေ့နေများက ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲသည် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးတည်ခဲ့သည်။ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်ရန် အနီးအပါး မြို့များနှင့် ရွာများမှ လူပေါင်းများစွာ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရ၏ စီးပွားရေး ပေါ်လစီအပေါ် မကျေနပ်ကြသော လယ်သမားများသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့ ဆန္ဒပြပွဲကို ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ လူဦးရေ ၅,၀၀၀ ရှိသော ရွာတစ်ရွာတွင်မှ ၂,၀၀၀ သည် သပိတ်မှောက်ပွဲသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ များမကြာမီ၊ အာဏာပိုင်တို့က ဆန္ဒပြသူမျာကို သေနတ်နှင့် ပစ်ခဲ့သည်။ ဦးနေဝင်းက “သေနတ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး” ဟု ညွှန်ကြားခဲ့ရာ ၎င်းသည် စစ်တပ်ကို ဆန္ဒပြသူလူထုထဲသို့ တည့်တည့်ပစ်ရန် အမိန့်ပေးသည့် အဓိပ္ပါယ်ပင် ဖြစ်သည်။ဆန္ဒပြသူများက လက်လုပ်ဗုံးများ၊ ဓားရှည်များ၊ ဓားများ၊ ကျောက်ခဲများ၊ အဆိပ်သုတ်ထားသော မြားတိုများနှင့် စက်ဘီး စပုတ်တံများကို ပစ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ကြသည်။ တစ်ခုသော ဖြစ်ရပ်တွင် ဆန္ဒပြသူများက ရဲဌာနကို မီးရှို့ပြီး၊ ထွက်ပြေးသော အရာရှိ လေးဦးကို ဆွဲဆုတ်ခဲ့သည်။ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စစ်သားများသည် ရန်ကုန် အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးကို မီးရှို့ခဲ့ရာ ဒဏ်ရာရသူများကို ကုသနေသော သူနာပြုများနှင့် ဆရာဝန်များ သေဆုံးခဲ့သည်။ နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယို ရန်ကုန်က “လုယက်သူများနှင့် အနှောင့်အယှက်ပေးသူများ” ၁,၄၅၁ ယောက် အဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ၈-၈-၈၈ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း သေကြေဒဏ်ရာရသူပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ရာပေါင်းများစွာမှ ၁၀,၀၀၀ အတွင်း ရှိခဲ့သည်။ စစ်အာဏာပိုင်တို့က ၉၅ ယောက်သေဆုံးပြီး ၂၄၀ ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဩဂုတ်လ ၁၃-၃၁ ရက်
ဤအချိန်အတောအတွင်းတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီး သည်လည်း နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်ထဲသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ များစွာသော ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ပြန်လည်ပါဝင်လာချိန် နိုင်ငံရေးရှုခင်းကို “ဒီမိုကရေစီ နွေရာသီ” ဟု တင်စားဖေါ်ပြခဲ့ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ရလဒ်များ ရှိသော်လည်း ဦးနေဝင်းသည် နောက်ကွယ်တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေခဲ့သည်။
လှုပ်ရှားမှုသည် ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်များကို အစိုးရမှ တုံ့ပြန်မှု ရရှိရန်အတွက် နေ့စဉ် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စစ်သားများကို ဘက်ပြောင်းရန် အားပေးခြင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ စစ်တပ်များ ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟူသော အားထားဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပရိတ်သတ်ကို မေတ္တာရပ်ခံခြင်း တည်းဟူသော မျှော်လင့်ချက် သုံးခုအပေါ်တွင် မှီခိုရသည့် တစ်ဖက်ပိတ်လမ်း အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အချို့သော တပ်မတော်သားများ၊ အများအားဖြင့် ရေတပ်မှ ဘက်ပြောင်းသွေဖည်ခဲ့ကြသော်လည်း အနည်းအကျဉ်းသာ ဖြစ်သည်။
နဝတ “အာဏာသိမ်းယူခြင်း” နှင့် နှိမ်နင်းခြင်း
ရန်ကုန် လူထု ဆန္ဒပြပွဲ အတွင်း စစ်တပ်က အဓိကရုဏ်းဖြိုခွဲရာတွင် ကျည်ဆန် ထိမှန်ခဲ့သော အ.လ.က(၄)ကြည့်မြင်တိုင်၊ အ.ထ.က(၂)လသာ ကျောင်းသူလေး မဝင်းမော်ဦး ကို သယ်ဆောင်လာစဉ်
“ကျွန်မကတော့ မြန်မာပြည်သားတွေ ဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲ အပစ်သတ်ခံရတယ် ဆိုတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်။”အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၂၂ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် စစ်တပ်သည် နိုင်ငံ့အာဏာကို ရယူခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး “ဦးနေဝင်း အာဏာပြ ချယ်လှယ်သည်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သော” နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (State Law and Order Restoration Council - SLORC) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဦးစောမောင်က မာရှယ်လောခေါ် စစ်တပ်မှ အုပ်ချုပ်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တွင် ဆန္ဒပြသူများသည် အကြမ်းဖက်ခံရလျှက် ပြိုကွဲခဲ့သည်။ အစိုးရက မြန်မာ့အသံမှတဆင့် စစ်တပ်သည် ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် “နိုင်ငံအဝှမ်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ဆိုးဝါးနေသည့် အခြေအနေများကို အချိန်မီ ရပ်တန့်ရန်” နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူခဲ့ရသည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
တပ်မတော် စစ်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရှိ မြို့များတွင် ရှိနေပြီး ဆန္ဒပြသူများကို အတားအဆီးမဲ့စွာ ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အာဏာရယူအပြီး ပထမ သီတင်းပတ်အတွင်း ကျောင်းသားများ၊ သံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသားငယ် ၁၀၀၀ ခန့် အသတ်ခံခဲ့ရပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသူ ၅၀၀ လည်း အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာအတွက် သတင်းရိုက်ကူးသူဖြစ်သော အနီးအနားရှိ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးက ရိုက်ကူးထားခဲ့သည်။ ဦးစောမောင်က သေဆုံးသူများကို “လုယက်သူများ” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် တောခိုခဲ့ကြပြီး အချို့ကျောင်းသားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် သင်တန်းများ တက်ခဲ့ကြသည်။
အရေးအခင်းပြီးနောက် ဆန္ဒပြပွဲများကို စီစဉ်ဦးဆောင်သူများကို ဦးတည်၍ “ကိုးရိုးကားရားနိုင်သော ဝါဒဖြန့်ချိမှုနည်းစနစ်”ကို န.ဝ.တ က စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က နိုင်ငံခြား သံတမန်များနှင့် သတင်းဌာနများသို့ န.ဝ.တ က မျက်နှာသာပေးသည့်အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြပွဲ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်နေချိန်၍ ယခင်သတင်းများနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ပိုမိုလွတ်လပ်သော သတင်းများ ပို့ပြီးသည့်နောက် မြန်မာ့သတင်းဌာနသည် ဤကာလအတောအတွင်း ပိုမိုတင်းကြပ်သော ကန့်သတ်မှုများ တွေ့ကြုံရသည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများတွင် လက်ယာသမားများနှင့် အဖျက်သမား နိုင်ငံခြားသားများ လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်ပြီး စစ်တပ်ကို ဖြုတ်ချရန် လုပ်ကြံမှုနှင့် လက်ဝဲသမားများ၏ အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန် လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုများအကြောင်း ၎င်းက အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရ၏ သီအိုရီအယူအဆကို ယုံကြည်သူ အနည်းငယ်သာ ရှိခဲ့သည်။ ယင်းသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲများ ပြုလုပ်နေစဉ် ကာလအတွင်း သည် သူပုန်များနှင့် တိတ်တဆိတ် စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်အခါတွင် အရေးအခင်းကြီးအား နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိကြကုန်သောမြန်မာနိုင်ငံသားများက မမေ့နိုင်အောင် မှတ်မိနေကြပြီး ဂုဏ်ပြုကြသောနေ့ တစ်နေ့လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရှိကြသော ကျောင်းသားများအကြားတွင်လည်း နှစ်စဉ် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း အမှတ်တရပွဲများ ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် လှုပ်ရှားမှုကို ပံ့ပိုးကူညီကြသည်။ အရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည် အနှစ် ၂၀ ပြည့်နေ့တွင် ထိုအဖြစ်အပျက်ကို အမှတ်ရ ကျင်းပကြသော လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ၄၈ ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်က မြန်မာပြည်သားများအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ ပံ့ပိုးမှုများ ပိုမိုရရှိစေခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသားများက အမှတ်တရ ကဗျာများ ရေးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် Beyond Rangoon ဟူသော ရုပ်ရှင်မှာ အရေးအခင်းကာလအတွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသော ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံကာ ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဖြစ်ရပ်သည် နောင် ၁၉ နှစ်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော၂၀၀၇ ခုနှစ် မြန်မာတို့ အစိုးရဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲများအတွက် အထူးအဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့သည်။
Tweedie, Penny. (2008). Junta oppression remembered Archived2May 2011 at the Wayback Machine.. Reuters.
Tallentire, Mark (28 September 2007). The Burma road to ruin Archived4March 2016 at the Wayback Machine.. The Guardian.
Woodsome, Kate. (7 October 2007). 'Burmese Way to Socialism' Drives Country into Poverty. Voice of America.